‘सुन्दर शरीर र स्वस्थ रहन फिटनेस’ - विवेचना
November 29, 2017 1,178 Views
मानिस हरदम फिट रहन चाहन्छ । सुगठित शरीर चाहन्छ । स्वस्थ र फिट शरीरले पर्सनालिटी झल्काउँछ । त्यसैले अहिले सुन्दर ज्यान बनाउन फिटनेस सेन्टर धाउने बढेका छन् । फिटनेस सेन्टर पनि बढ्दै गएका छन् । बिर्तामोडमा ७ महिनाअघि ग्यालेक्सी फिटनेस सुरु भयो । जसको प्रशिक्षकमा शारीरिक सुगठनतर्फ राष्ट्रिय गोल्ड मेडलिस्ट राम दाहाल सञ्चालक तथा प्रशिक्षकका रुपमा रहेका छन् भने अन्य सञ्चालकमा चन्द्र लाफा मगर र सन्दिप शेर्मा छन् । लामो समय शारीरिक सुगठनको क्षेत्रमा बिताएका राम दाहालसँग विवेचनाकर्मी एकराज प्रधानले गरेको कुराकानी :
तपाईं फिटनेसमा लाग्दाको अवस्था कस्तो थियो ?
२४ वर्ष भयो यस क्षेत्रमा लागेको । म त्यसबेला १७ वर्षको थिएँ । सुरुमा धरानमा हो म जिम गएको । त्यसबेला सामान्य डम्बल्स मात्र थिए । मल्टी फिटनेस आइटम थिएन । साइकलको चेन हालेर हाइ एन्ड लो पुल्ली बनाइएको थियो । स्वास्थ्यका लागि भन्दा पाखुरा कसरी बढाउने भन्नेमा सबै हुन्थे । तालिम गराउने हुँदैनथे । अनि फिटनेसमा खर्च गर्ने चलनै थिएन ।
शारीरिक सुगठनमा धेरै उपाधिहरु जित्नु भएको छ, यस क्षेत्रमा कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
पहिला म जुडो खेलाडी । ब्ल्याक बेल्ट होल्डर । ७ वर्षसम्म पुलिसमा जुडो ट्रेनर बनेर काम गरेँ । नेसनल गेममा ३ वटा गोल्ड मेडल पाएँ । यति हुँदा पनि आफ्नो शारीरिक बनावटसँग सन्तुष्ट भइनँ । नेसनल प्लेयर हुँदा पनि कसैले वास्तै नगर्ने । ज्यान सामान्य भएर । जब मैले ज्यान बनाउन सुरु गरेँ, सबैको ध्यान मतर्फ तानिन थाल्यो । मलाई त्यसबेला शरीरको बनावटले व्यक्तित्व प्रभावमा ठूलै भूमिका हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो । र, म २०५७ बाट निरन्तर शरीर बनाउन व्यायाम गरिरहेको छु ।
शारीरिक सुगठनमा लागेर के पाउनु भयो ?
शारीरिक सुगठनमा लागेर मैले मात्र पाइनँ, पुरै झापाले गोल्ड मेडल पाएको छ । २०७२ को सातौँ राष्ट्रिय खेलमा झापाली खेलकुद क्षेत्रमा बडी ब्युल्डिङमा एक मात्र गोल्डमेडल पाउने खेलाडीका रुपमा म पर्छु । १५ वर्षदेखि गोल्ड मेडल लगातार जितिरहेको छु । ट्रेनरको रुपमा कमाइ पनि गरिरहेको छु । थुप्रै अवसर पाइरहेको छु । यो क्षेत्रमा लागिरहन पारिवारिक साथको धेरै महत्व हुन्छ । मेरो श्रीमती र परिवारका सदस्यहरुको ठूलो साथले म सफल भएँ भन्ने लाग्छ ।
ग्यालेक्सी फिटनेसको सञ्चालक र प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, युवाको रुची कस्तो छ ?
बिर्तामोडमा ग्यालेक्सी फिटनेस सुरु गरेको मात्रै ७ महिना भयो । अहिले यहाँ ७ सयभन्दा बढीले व्यायाम गर्छन् । नसुहाउँदो शरीरले व्यक्तित्वलाई नै प्रभावित गर्छ भन्ने सबैले बुझेका छन् । अझ युवा त शरीरमा फिट हुने कपडा लगाउन चाहन्छन् । त्यसैले आकर्षक शरीर बनाउन उनीहरु फिटनेस सेन्टर आउँछन् ।
बिर्तामोडमा यसअघि नै धेरै फिटनेस सेन्टर थिए, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ?
फिटनेसलाई लामो समय बुझेको र प्रशिक्षक बनेको मान्छे म आफैँ सञ्चालक, चन्द्र लाफा मगर र सन्दिप शेर्माजस्ता स्थानीय साथीहरु सञ्चालक भएकाले सुरुवातै सजिलो बन्यो हाम्रा लागि । अरु छाडेर आउने पनि छन् यहाँ । शरीर बनाउन खर्च गर्न थालेका छन् । फिटनेसका आधुनिक सामग्री र प्रशिक्षणका कारण आकर्षण थपिएको छ । ग्यालेक्सीले सुरुवातको पहिलो वर्षमै पूर्वाञ्चलस्तरीय मिस्टर पूर्वाञ्चल गराउन सक्यो । यसलाई सफलता मान्नुपर्छ । यही वर्ष ग्यालेक्सी फिटनेस नै आयोजक रहेर मिस्टर झापा आयोजना गर्ने तयारी हुँदैछ । मेरो चाहना हो, मैले जस्तै यहाँका अरुले पनि गोल्डमेडल जितुन् । त्यसको अवसर उनीहरुलाई प्राप्त होस् ।
सुगठित शरीरका लागि फिटनेस सेन्टर नै किन ?
शारीरिकभन्दा मानसिक काम गर्ने बढेका छन् । थोरै हिँड्न पनि अल्छी गर्छन् । हाम्रै कारणले शरीरलाई आवश्यक व्यायाम समेत हुन पाइरहेको छैन । अनि शरीर हुन्छ भद्दा । भद्दा शरीर कसैलाई मनपर्दैन । त्यसैले फिट रहन जरुरी छ । फिटनेस नै आउनुको थुप्रै कारण छन् । जस्तो पायो त्यस्तो व्यायामले शरीर बन्ने होइन बिग्रन्छ । यहाँ व्यायाम कसरी गर्ने भन्ने तालिम गराइन्छ । व्यायामका लागि मानसिक रुपमा कसरी तयार हुने, कस्तो खानपिन गर्ने, कति समय कस्तो व्यायाम गर्ने भन्ने सिकाइन्छ । कस्तो शरीरका लागि कस्तो व्यायाम गराउने, कति गराउने भन्ने ध्यान दिइन्छ । फिटनेसमा निश्चित समयमा निश्चित व्यायाम गरिने भएकाले शारीरिक बनावटका लागि जरुरी छ ।
Previous खुल्ला दिसामुक्त घोषणाका लागि झापामा अपर्याप्त बन्दै सरसफाई प्रबद्र्धन आपूर्ति पक्ष
Next भारतले निर्यातमा अंकुश लगाएपछि प्याजको मूल्य छोइनसक्नु